मौसममा फेरि गडबड, मंगलबारदेखि वर्षा ? - Dainik Nepal
मौसममा फेरि गडबड, मंगलबारदेखि वर्षा ?
दैनिक नेपाल २०७५ माघ २८ गते १२:१७
काठमाडौँ, २८ माघ । मौसममा आज फेरि बदली भएको छ । जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार आज काठमाडौं उपत्यकासहित देशका विभिन्न भेगमा मौसम बदली भएको छ । लगातार तीन दिनदेखिको वर्षा र हिमपात रोकिएर आइतबार केही खुलेको आजदेखि बदली भएको हो ।
महाशाखाकी मौसमविद् वरुण पौडेलले आज विशेषगरी पश्चिमको पहाडी क्षेत्रमा वर्षा तथा उच्च पहाडी भेगमा हिमपात हुने सम्भावना रहेको बताइन् । काठमाडौंमा पनि हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको मौसमविदहरुले जनाएका छन् ।
यसैबीच भोलि (मंगलबार) बाट अझ वर्षा गराउने खालको नयाँ प्रणाली भित्रिँदैछ । ‘भोलिदेखि नयाँ खालको प्रणाली भित्रिने सम्भावना देखिएको र यो अहिलेको भन्दा शक्तिशाली रहेको मौसमविदहरुको भनाई छ । यसले अलि ठूलो वर्षा गराउनेछ ।
बिहीबारदेखि लगातारको वर्षा र हिमपात रोकिएर आइतबार काठमाडौं उपत्यकासहित देशका धेरै ठाउँमा घाम लागेको थियो ।
मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार यसअघिको पश्चिमी वायुको शक्तिशाली न्यून चापीय प्रणाली शनिबार राति बिदा भई कमजोर प्रणाली भित्रिएपछि मौसममा सुधार आएको हो।
हुम्लामा स्वाथ्यकर्मीको शव झुण्डिएको अवस्थामा भेटियाे
खोटाङमा लोक सेवा परिक्षाको प्रश्नपत्र च्यातियो, चार जना पक्राउ